ငိုးမယွေးကော်အဆိုးဓမြလေးနော် FUEC | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » ငိုးမယွေးကော်အဆိုးဓမြလေးနော် FUEC
ငိုးမယွေးကော်အဆိုးဓမြလေးနော် FUEC
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 19, 2015 in 2010/2012/2015 Election, Opinions & Discussion |6comments
တိုင်းပျီကံကြမ္မာ အဆုံးဖြတ် ပေးမည်ဆိုတဲ့ ၂၀၁၅ အထွေထွေ ရွေးဂေါက်ပွဲ ရက်၂၀သာလိုပါတော့သည်။ စင်္ကာပူရောက် မြန်တျန့်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး နိုးကြားတက်ကြွမှုကတော့ သမိုင်းဝင်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာသိဖာသာ ဖြစ်နေသော ပြည်ဒွင်းနေ အချို့အတွက်လည်း တပ်လှန့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပါလိပ်မြည်း။ ဂုံလျှူ ပါတယ် စင်္ကာပူရောက် တမီးလေးဒို့။ အာ…..ဗွါး…။
ရွေးကော်ငှက်ကထ ဗိုချုပ်ဟောင်း အူးတင်အေး ပီးခဲ့ဒဲ့အပတ်က နိုင်ငံရေးပါတီ အချို့နဲ့ ရွေးဂေါက်ပွဲအချိန် ရွှေ့ဖို့ တွေ့တာ အားလုံး သိဂျပါမယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၀လောက် ရှိတဲ့အထဲက ၁၀ပါတီ ဆိုလား တက်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကလွဲလို ကျန်ပါတီများ သဘောတူ (သို့) ကန့်ကွက်မှု မရှိလို့ သတင်းမှာ ဆိုတယ်။ ပါတီနဲပေးပဲ ကိုယ်စားလှယ်ထိုင်ခုံ ၇၀% အကြုံးဝင်ကြောင်း ဖြေရှင်းတယ်။ ရွှေ့မယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ ရှိထားပြီးမို့ သိပ်တော့ မအံ့ဩ။ ရွှေ့ရွှေ့ မရွှေ့ရွှေ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏှာ၊ ယန္တရား အားလုံး စစ်ဗိုစုတ်တွေ လက်ထဲမှာ။ ဘွားဒေါ်ကိုယ်တိုင်က ရွှေပြည်အေးတရာဟော၊ ဒီချုပ်ထောက်ခံသူ အများစုက ဟောက်လိုက်လျင် အီးတောင် ကျယ်ကျယ်ပေါက်ရဲသူများ မဟုတ်။ စဉ်းစားရမှာ ဘာကြောင့် ဒီလို ခေါ်သလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။ အန်အယ်ယ်ဒီ ကန့်ကွက်မှာ၊ ဖွတ်နဲ့သူတို့ဘောမ အန်ဒီဖွတ်လို ပါတီတွေ သဘောတူ၊ မကန့်ကွက်မှာ တွက်ကြည့်လို့ ရတယ်။ ဒါကို သိသိနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက် ခေါ်တယ်ဆိုတော့ အခြားအကြောင်းရှိရမည်။
အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ အပြောင်းအလဲ လိုလားသည့်လူထုကို ခြိမ်းခြောက်တာ ဖြစ်သည်။ ရွေးဂေါက်ပွဲ ငါတို့လက်ထဲရှိသည်.. အကယ်၍ ရွှေ့ဖြစ်ခဲ့လျင် ပြောထားဆိုတားပြီးသား၊ ချုံခိုတိုက်ခြင်း မဟုတ်ဟု အကြောင်းပြနိုင်သည်။ ရွှေ့ဖို့ရော အလားအလာ ရှိသလား။ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင်သည်။ မဲပေးမည့်ရက် နီးလေ ရလာဘ် သိသာလေမို့ ဖွတ်တို့ သွေးပျက်လေ ဖြစ်မည်။ ထပ်ပြောပါမည်.. ဒီချုပ် အပြတ်အသတ်နိုင်မည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရလာဘ်ထက် မနည်းစေလျ။ ကံကောင်းလျင် တောင်ပြိုကမ်းပြိုပင် မဟုတ် တိမ်ပြို မိုးပြို ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြသနှာက ရွေးကော်ကို လွှတ်ထားခဲ့တာ အဓိက အားနည်းချက်။ အချိန်ရပါလျက် ဘွားဒေါ် ဘာမှ မလှုပ်ခဲ့။ ရွေးကော်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ဟန် မတူ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ချက် အာရုံသိပ်စိုက်ပြီး ဟိုလည်းလွတ် ဒီလည်းလွတ်.. အန္တရာယ် သိပ်ကြီးပါတယ်။ အမှားဆုံးက ကြားဖြတ်နောက်ပိုင်း လစ်လာဘ်သွားတဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ဒုတိယ ကြားဖြတ်ထပ်မလုပ်ဖို့ သဘောတူခဲ့တာ။ အဲတုံးကသာ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် တောင်းဆိုခဲ့လျင် ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ မဲစာရင်းအမှား၊ ပြင်ဆင်မှု ချို့ယွင်းချက်တွေ ကောင်းစွာ တင်ကြို သိမည်၊ ရွေးကော်ကို လုံလောက်သော ဖိအား ပေးနိုင်မည်။ ခုတော့ နောက်ကျခဲ့ပြီ၊ အူးတင်အေး လိမ်သမျှ အံကြိတ် ခံပေဒေါ့..။
လေပျံစီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသော သရဲဂေါင်းကြောင်ကြီး
တင်ကြိုကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းကဲ့သို့ အရေးကြီးသည် ဆိုပါလျင် ပထမပွဲ လွဲခဲ့ပြီ။ ကုသရေး ပြင်ဆင်ဖို့သာ ကျန်သည်။ သတင်းတခုမှာတော့ ဗော်လံတီယာလှုပ် မဲပေးမှု စောင့်ကြည့်မည့်သူ ခြောက်ထောင်ကျာ်ရှိကြောင်း ဆိုသည်၊ တတိုင်းတပြည်လုံး အတိုင်းအတာအတွက် လုံလောက်သော ပမာဏ မဟုတ်။ မဲလိမ်၊မဲခိုး သေချာနေပြီမို့ စောင့်ကြပ်လေ့လာမှုများအနက် exit poll ခေါ်သည့် မဲရုံမှ မဲပေးပြီး ထွက်လာသူကို မေးသည့် လုပ်ငန်း ပိုအရးကြီးသည် ထင်၏။ မေးရုံနဲ့မပြီး စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင် ထိန်းသိမ်းဖို့လိုသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာဖြင့် ရိုက်ကူး မှတ်တမ်းတင်လျင် ပိုကောင်းသည်။ မိုဘိုင်းဖုံးများ ရှိနေပဲဟာ။ ဖုံးဘတ္တရီ၊ မင်မိုရီကတ် စသည်တို့ အလုံအလောက်ရှိရမည်။ စာရွက်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလည်း တပါတည်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ စာရင်းပြုစုပုံ ပြုစုနည်းတော့ အသေးစိတ်မသိ၊ ရမည်ဆိုလျင် နာမည်၊ ရပ်ကွက်၊လမ်းတို့ကို နာရီအပိုင်းခြားအလိုက် မှတ်သားသင့်သည်။ ဒါမှ လိုအပ်လျင် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနှင့် အလွယ်တကူ တိုက်ဆိုင် လျှာဖွေလို့ရမည်။ ကိုယ့်အတွက်လည်း သက်သေဖြစ်မည်။ အချိန်တိုင်း မှတ်ဖို့မလို တနာရီခြား အမှတ်သားပြုလျင် လုံလောက်သည်။ မဲလာပေးသူ အရေအတွက်သိရန် မဖြေသူများကိုလည်း ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုမှတ်တမ်း တင်သူများကို ရပ်ရွာလူထုမှ အချိန်ပြည့် ဝန်းရံဖို့ သာတူညီမျှ အရေးကြီးပါသည်။
ရွေးဂေါက်ပွဲ နေ့ရက် ရာနှုန်းပြည့် မသေချာပါ။ ဘာနဲ့တူသလဲဆို နိုင်ငံခြားထွက်လျင်တောင် လေယာဉ်မိုးပေါ်ရောက်၊ နိုင်ငံခြား နယ်နမိတ်ထဲဝင်မှ လွတ်ကြောင်း သေခြာသော တိုင်းပြည်တွင် သတိပဌာန်တရား ဖြစ်မှဖြစ်သည် ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့် ရှုမှ ရမည်ဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော။
မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ဦးကြောင် ပြန်လာခဲ့ပါ့လား
. တောက်ရှ် …. ရွှေးကော် အုတ်ကထ…. ဦးကြောင် ဖြစ်ရမှာ…
သူယွ ​ရေ ငါလည်း ​ရွေး​ကော်​ အုပ္ကထ လုပ်​ရ​ကောင်းမလားလို့ ကျန်​တဲ့ ရန်​ပုံ​ငွေ​တွေ ထည့်​မတွက်​နဲ့ဦး ကိုယ်​စားလှယ်​​လောင်း တစ်​​ယောက်​ သုံးသိန်းတဲ့ ခု အ​ရွေးခံမဲ့ သူ ၆ ​ထောင်​​ကျော်​ ဘယ်​​လောက်​ရမလဲတွက်​ကြည့်​ ။ အ​ရွေးခံရမဲ့သူက ရှိရင်​တစ်​​ထောင်​ဆို​တော့ လူငါး​ထောင်​ သုံးသိန်းစီက ဟီးဟီး ဟိုစရိတ်​ ဒီစရိတ်​ စာရင်း ပြလိုက်​ရင်​ ကိုယ့်​အိတ်​ထဲ​ရောက်​ပြီးသား
၂၀၁၀ တုန်းက ကြိုတင်မဲနဲ့ ညစ်တာ။
၂၀၁၅ ကျတော့ မဖင်အေး တစ်ယောက်ထဲ နာမည်သုံးပြီး ညစ်နေတာ ဝလချီးစကြာရမ်းရောပဲ။
စလုံးမှာရော ကိုရီးယားမှာရော မဲပေးပြီးသူတွေ အတွက် ဆားဗေးသီးသန့်ရှိတယ်။
စလုံးမှာက ၉၆ ဒသမ ၅ ရာနှုန်း ဒေါင်း နိုင် နေပြီ။
ကိုရီးယားမှာ ဖွတ် အတွက် မဲ မပါဘူးတဲ့။
ကြောင်ကြောင် စိနပြည်မှာ မြန်မာသတင်း တွေ ကို ဒီရက်ထဲ ဘလော့လုပ်နေတာလေး ဝေဖန်ပါဦး။
စိနတိုင်းသားများ က မြန်မာတွေ သူတို့လောက် လဲ မချမ်းသာ၊ သူတို့ လောက်လဲ ပညာမတတ်ဘဲ နဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြစ်သွားတာ ကို မခံချိ မခံသာ ဖြစ်နေကြတာ ဆိုဘဲ။
ရွှေပြည်သားတွေ ကို အားကျ နေကြပြီနော။
PS – ဆဲတုန်းက နင်းကန်ဆဲပြီး အခုမှ ပုန်းနေတာလား။
FB ထဲ မှာရော ဒီကြောင် ရှိနေလား။
ဖဘက ကြက်ဖအကောင့်ပုန်းပိုင်ရှင်ကတော့ ဒီမိုကရေစီရလို့ ပေါ်လာပြီ။
ကြောင်ကြီးခမျာမတော့ နှစ်ဖက်လုံးကို ခွတီးခဲ့တော့ ဒီမိုရလည်းမပေါ်နိုင်။ :p: